Vaovao - fironana sy firoboroboan'ny modely fakantsary
Fironana sy firoboroboan'ny modely fakantsary
I. Ny firafitra sy ny firoboroboan'ny modely fakan-tsary
Ny fakan-tsary dia nampiasaina betsaka tamin'ny vokatra elektronika isan-karazany, indrindra ny fampandrosoana haingana ny indostria toy ny finday sy ny takelaka, izay nahatonga ny fitomboan'ny indostrian'ny fakantsary. Tao anatin'izay taona faramparany izay, ny maodelim-pikantsary fampiasa amin'ny fakana sary dia nanjary be mpampiasa indrindra amin'ny fitaovana elektronika, fiara, fitsaboana, sns. Ohatra, ny modely fakan-tsary dia lasa iray amin'ireo kojakoja fampiasa amin'ny fitaovana elektronika azo entina toy ny telefaona finday sy solosaina takelaka . Ny modules fakantsary ampiasaina amin'ny fitaovana elektronika azo entina dia tsy vitan'ny maka sary fotsiny, fa manampy ihany koa ireo fitaovana elektronika azo entina mahatsapa antso video sy fiasa hafa eo noho eo. Miaraka amin'ny firoboroboan'ny fivezivezena fa ny fitaovana elektronika azo entina dia lasa manify sy maivana ary ny mpampiasa dia manana fepetra takiana avo kokoa sy avo lenta kokoa ho an'ny kalitaon'ny fakantsary fakan-tsary, dia takiana amin'ny habeny ankapobeny sy ny fahaizan'ny sary fakantsary fakan-tsary. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny firoboroboan'ny fitaovana elektronika azo entina dia mitaky modules fakan-tsary hanatsarana bebe kokoa sy hanamafisana ny fahaizan'ny sary amin'ny alàlan'ny haben'ny fihenan'ny habeny.
Avy amin'ny firafitr'ilay fakantsary finday, ny ampahany lehibe dimy dia ny: ny sary sensor (mamadika ny signal light ho signal elektrika), Lens, moto coil de vue, modely fakan-tsary ary sivana infrared. Ny rojom-pandraharahana fakan-tsary dia azo zaraina ho solomaso, motera coil feo, sivana infrared, sensor CMOS, processeur sary ary fonosana mody. Ny indostria dia manana ambaratonga teknika avo lenta ary mifantoka amin'ny haavon'ny indostria. Misy modely fakantsary:
1. Birao boribory misy boribory sy singa elektronika;
2. fonosana mamonosina ny singa elektronika, ary misy lavaka napetraka ao anaty fonosana;
3. Chip photosensitive mifamatotra amin'ny herinaratra amin'ny faribolana, ny fonon'ny fantsona photosensitive dia nofonosin'ny fonosana, ary ny tapany afovoan'ny chip photosensitive dia napetraka ao amin'ny lavaka;
4. Solomaso mifamatotra miorina amin'ny tampon'ny fonosana; SY
5. Sivana mifandraika mivantana amin'ny solomaso, ary nalamina ambonin'ilay lavaka ary mifanohitra mivantana amin'ny puce photosensitive.
(I) CMOS sensor: Ny famokarana sensor dia mila teknolojia sy dingana sarotra. Nanjakan'i Sony (Japon), Samsung (Korea atsimo) ary Howe Technology (US) ny tsena, miaraka amin'ny 60% ny tsena.
(II) Solosaina finday: ny solomaso dia singa optika mamorona sary, mazàna dia misy singa maromaro. Izy io dia ampiasaina hamoronana sary eo amin'ny lafiny ratsy na ny efijery. Ny lens dia mizara ho solomaso solomaso sy vera. Raha ampitahaina amin'ny solomaso resin, ny vera fitaratra dia manana index refrakativa lehibe (manify amin'ny halaviran'ny ifantohany) ary ny fandefasana hazavana avo. Ankoatr'izay, sarotra ny famokarana solomaso fitaratra, ambany ny tahan'ny vokatra, ary lafo ny vidiny. Noho izany, ny solomaso fitaratra dia ampiasaina amin'ny fitaovana fakana sary avo lenta, ary ny lantana resin dia ampiasaina amin'ny fitaovana fakana sary ambany.
(III) Motor coil (VCM): karazana motera ny VCM. Ny fakan-tsarimihetsika finday dia mampiasa VCM betsaka kokoa hahatratrarana ny fifantohana mandeha ho azy. Amin'ny alàlan'ny VCM, ny toeran'ny solomaso dia azo ahitsy hanehoana sary mazava.
(IV) Module fakan-tsary: ​​ny teknolojia fonosana CSP dia nanjary tsikelikely
Satria ny tsena dia manana takiana avo lenta sy avo kokoa ho an'ny smartphone manify sy maivana kokoa, nanjary nihanahery vaika ny maha-zava-dehibe ny fizotran'ny fonosana fakan-tsary. Amin'izao fotoana izao, ny fizotran'ny fakan-tsarimihetsika fakantsary mahazatra dia ahitana COB sy CSP. Ny vokatra misy pikantsary ambany dia fonosina ao amin'ny CSP, ary ny vokatra manana piksela avo ambonin'ny 5M dia fonosina ao amin'ny COB. Miaraka amin'ny fandrosoana mitohy, ny teknolojia fonosana CSP dia miditra tsikelikely amin'ny vokatra 5M sy ambony avo lenta ary azo inoana fa ho lasa lehibe indrindra amin'ny teknolojia famonosana amin'ny ho avy. Nentin'ny alàlan'ny fampiharana finday sy fiara, ny haben'ny tsenan'ny modely dia nitombo tsikelikely tato anatin'ny taona vitsivitsy.